प्रमुख समाचार मन्त्रीक्वार्टरमा मन्त्रीपुत्रको मनपरी � सुविन श्रेष्ठ ललितपुर । शुक्रबार एकैपटक राजीनामा बुझाएका मन्त्रीहरू बिचल्लीमा परेका छन् । क्वार्टरमा बस्दै आएका १८ मध्ये पाचजना पुनः मन्त्री बनेपछि अन्यलाई क्वार्टर छाडेर कहा� बस्ने भन्ने पीडाले सताएको हो । आफन्त भएका र समयमै डेरा सुरक्षित राख्न सकेका केही मन्त्री सोमबार सरेका छन् । शनिबार र आइतबार बुद्ध जयन्तीको बिदासहित क्वार्टरभित्रै भेटघाट र भोज खाएर तिनले क्वार्टर छाडेका हुन् । बुद्धजयन्तीको बिदा हुनाले सुरक्षामा दुईदिन छुट दि�दै सोमबार पूर्व राज्यमन्त्रीहरू हरिराज खेवा, काशीदेवी झा, सुनिताकुमारी महतो र सुष्मा शर्माका अंगरक्षक पनि हटेका छन् । मन्त्रीलाई सुरक्षाका लागि एक असई, हवल्दार र चारजना सिपाहीको व्यवस्था हुन्छ ।
मन्त्रीक्वार्टरमा उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीसहित १८ मन्त्री बस्दै आएका थिए । जम्बो मन्त्रिमण्डलका थप ३० मन्त्री भने बाहिरै थिए । १८ मन्त्रीका लागि क्वार्टरभित्र ए, बी, सी र डी चार ब्लक छन् । ए, सी र डी ब्लकमा ५�५ वटा क्वार्टर छन् र बीचमा चार क्वार्टर छन् । यीमध्ये डी ब्लकमा आधुनिक घर छन् । कोठा राम्रा र ठूला छन् । सुरक्षा स्रोतका अनुसार डी ब्लक प्रायः प्रभावशाली मन्त्रीको अधीनमा पर्छन् । डी ब्लकको क्वार्टरमा विजयकुमार गच्छदार डी १, राजेन्द्र महतो डी २, टोपबहादुर रायमाझी डी ३, नारायणकाजी श्रेष्ठ डी ४ र पोष्टबहादुर बोगटी डी ५ मा बस्छन् । डेरा खोज्दै मन्त्रीहरू
मन्त्रीपदबाट मुक्त भएपछि गोपाल किरातीले सोमबार क्वार्टर छाडे । स्रोत भन्छ, �राजलाल यादवलगायत आधा मन्त्री डेरा खोजिरहेका छन् ।� यस्तै बाध्यता रहे एक सातासम्म क्वार्टरभित्र बस्न पाइने प्रावधान छ । स्रोतका अनुसार एमालेका तर्फबाट पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले पद छाडेकै मध्यरात क्वार्टर छाडेका थिए । भौतिक तथा योजनामन्त्री हु�दा विजयकुमार गच्छदार मन्त्रीबाट हटे पनि पुनः मन्त्री हुन्छु भन्दै २१ दिन क्वार्टरभित्रै अड्डी कसेर बसेका थिए । मन्त्रीपुत्र कस्तो बदमास !
केही समयअघिका ऊर्जा राज्यमन्त्री चन्द्रसिंह भट्टराईलाई धेरैले बिर्सेका छैनन् । कारण, उनी निम्त्याइएका कार्यक्रममा साधारण पहिरनमा देखिन्थे । विनासुट र पेटी कार्यक्रममा पुग्दा आयोजक झुक्किन्थे । ललितपुरको टीकाथलीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुग्दा आयोजकहरू मन्त्री खोइ भनी धेरैबेर अल्मलिएका थिए । �उनैका पुत्रले मन्त्रीक्वार्टरमा गर्नुसम्म गरे,� स्रोतले भन्यो, �प्रायः निजी सचिवजस्तै सधै� क्वार्टरमा आइरहने भट्टराई पुत्रले नपच्ने काम गरेका छन् ।� स्रोतका अनुसार मन्त्रीपदबाट भट्टराई हटेर क्वार्टर छाड्ने दिन पुत्रले ओछ्यानमा आची गरेर तन्नाले छोपी हि�डेका थिए । यसैबीच, मन्त्रीबाट मुक्त भएर बाहिरि�दा कम्प्युटरका सामान हराउने गरेको पाइएको छ । मन्त्रीबाट बदमासी नभए पनि छोरा, भाइबुहारी र कामदारबाट चोरी हुने गर्छ । नया� मन्त्री आएपछि नया� पर्दा, कार्पेट, सोफा फेर्नुपर्छ । मन्त्रीका हरेक कोठामा एक थान टिभी र कम्प्युटरको व्यवस्था हुन्छ । कुनै बेला मन्त्रीक्वार्टरमा कार्यक्रम हु�दा आफन्तले खाएको खाजाखर्चको भुक्तानी नहु�दै मन्त्री पदमुक्त हुन्छन् । त्यो पैसा कसले तिर्ने ? कतिपय खाजा खुवाउनेहरू समस्यामा परेका छन् । यता पत्रिका दि�दै आएका वितरकले पनि पूर्वमन्त्रीहरूलाई वितरण गरेको पत्रपत्रिकाको रकम नपाएको गुनासो गरे । मन्त्रीक्वार्टरमा कमला रोका, ईश्वरदयाल मिश्र, हेमराज तातेड, अनिलकुमार झा, मोहमद वकिल मुसलमान, मालबर सिंह थापा, बृजेशकुमार गुप्ता, राजकिशोर यादव र राजलाल यादव छन् । आज सा�झसम्म कमला रोका, हेमराज तातेड र गुप्ताले क्वार्टर छाड्दै छन् । प्राप्त प्रतिक्रियाहरु	(0) यसमा तपाईको प्रतिक्रिया	(रोमनबाट युनिकोड नेपालीमा लेख्नुहोस्) नाम